Na amin` ny 04 ora maraina. Ny alarobia lasa teo dia mpiasana radio tsy miankina any an-toerana no isan`ireo niharan`izany herisetra izany tao amin`ny fokontany Soatsiky. Marihana fa am-polony ireo olona iharan` izany halatra sy daroka izany. Araka ny fampitam-baovao avy amin` ny mpitandro filaminana any an-toerana dia efa misy voasambotra ireo olon-dratsy ary misy mihitsy no efa naiditra am-ponja any Morondava. Saika olona manodidina an`I Belo sur Tsiribihina no manatanteraka izany asa ratsy izany, hoy hatrany ny fampitam-baovao. Manaitra ny tompon`andraikitra ny mponina mba hisian` ny vahaolana maharitra momba ny tsy fandriampahalemana.